Indlu yaseMnaha River
I-River House, ekwiikhilomitha ezingama-30 kumntla-mpuma we-Joseph, OR, inomtsalane, kunye negumbi lokulala elikhulu elinamagumbi amathathu elibekwe elunxwemeni lwendawo yasendle kunye nembonakalo entle, yoMlambo i-Imnaha. Jabulela ukuloba, ukubhukuda, ukuhamba okanye ukulala phantsi kwe-arbor yeediliya kwi-hammock yekotoni. Ziphumze kwi-sauna, khetha imifuno emitsha egadini, kwaye uyose i-marshmallows emlilweni ovulekileyo.
**NgoMatshi nangoAprili amaxabiso obusuku ngabunye anesaphulelo se-15% esakhelwe ngaphakathi!**
Ifumaneka elunxwemeni lomlambo wasendle kunye nendawo entle yoMlambo i-Imnaha, i-River House inoxolo, kwaye yabucala (iikhilomitha ezintathu ukuya kwilokishi yase-Imnaha-yabemi abangama-30, kunye nemayile enye ukuya koyena mmelwane usondeleyo). Konwabele ukuloba kwingca engaphambili, ukukha iitumato ezivuthiweyo egadini, kunye neziqhamo ezitsha kwigadi yeziqhamo. Ikhaya lethu elitofotofo lixhotyisiwe ukuze libonise ilifa lethu lasentshona. Amagumbi okulala axhotyiswe ngeebhedi ze-queen kunye ne-down comforters. Ezimbini zineedesika zokubhala nazo. Lo mhlaba unesauna yomphanda kunye nomgodi womlilo osetyenziswa ngamaxesha athile onyaka. Sithintelwe kwimibuzo emithandathu.
4.99 ·Izimvo eziyi-86
Eyona nto ilungileyo ngobumelwane kukuba bambalwa kakhulu abantu! Ummelwane okufutshane uyimayile enye. Unokubona i-elk, ixhama, ibhere, i-cougar, ii-bobcats kunye nazo zonke iintlobo zeentaka kunye nobomi bomlambo. Yazi ukuba zintathu iindidi zeenyoka kwimiwonyo. Inkunzi, umdyarho ozuba, kunye neenyoka zedayimaneback. Zininzi iindlela zasemva kwelizwe zokuhlola kunye namathuba okubona.
Idolophu yaseJoseph, ekumgama oziikhilomitha ezingama-30 kuphela, isembindini woluntu oluncinane, oludlamkileyo, lobugcisa nezolimo. Ngalo lonke ixesha kukho umsebenzi omninzi oqhubekayo. Kwaye ungalibali ukutyelela i-Wallowa Lake, i-1 yeemayile ngaphandle kwe-Joseph.
Unxibelelwano lwethu neendwendwe luncinci. Ngexesha leenyanga zasehlotyeni kusenokufuneka sivune imifuno egadini, okanye silungise indlela yokunkcenkceshela, kodwa siya kumisela ixesha nawe kwangaphambili. Qaphela ukuba isixhobo seGPS kwifowuni yakho siya kukusa kwindlela ejikelezayo, ebuyela ngasemva kwipropati yethu! Musa ukuyithemba! Cela ulwalathiso xa sele ubhukishe, nceda!
Unxibelelwano lwethu neendwendwe luncinci. Ngexesha leenyanga zasehlotyeni kusenokufuneka sivune imifuno egadini, okanye silungise indlela yokunkcenkceshela, kodwa siya kumisela ix…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Imnaha